2019-4-24harare -- zimbabwe on tuesday signed a multibillion-dollar mining deal with chinas tsingshan that will see the chinese firm mining chrome, iron ore, nickel and coal in zimbabwe.
2018-1-10zimbabwe is poised for growth and, with the country committed to ensuring a sustainable growth path, there are a host of investment opportunities in the mining.
Zimbabwes Biggest Coal Miner Plans 1Billion
2014-7-16makomo resources pvt ltdzimbabwes largest coal producer by output, said it plans to spend 1 billion on a 600-megawatt power plant and will also start exporting the fuel to steelmakers.
Zimbabwes untapped mining potential zimbabwe is endowed with abundant mineral resources platinum is the obvious standout, with the countrys reserves second only to neighbouring south africa, as well as one of the worlds richest diamond deposits in the marange fields.
2019-10-14hoopwestern investments ta afrimining was founded in 2008 and is based in zimbabwes capital city harareur core business is the provision of quality earthmoving equipment and services throughout the southern african region.
Mining in zimbabwe zimbabwes mining industry is focussed on a diverse range of small to medium mining operationshe most important minerals produced by zimbabwe include gold, asbestos, chromite, coal and base metals.
2017-9-3zimbabwe is working on minimum coal mining standards to ensure operational uniformity following the entry of new players in coal extractioneputy minister of mines and mining development fred moyo told the sunday mail business that coal miners activities had become haphazard since the entry of new operators.
2019-8-8japan and india bought 16,7 percent and 16,2 percent of the worlds total coal imports last yearn his remarks, president mnangagwa said zimbabwe should take advantage of.
2019-10-21top mining companies in zimbabwe utilise africa mining iqs updated and verified database about mining in africa only africa mining iq has mining intelligence on 28 zimbabwean mining projects valued at over r58 billion minerals mined in these projects include gold 18, nickel 3, diamond 2, coal 1 and industrial 1.